Mukadzi ane simba zvakanyanya munhoroondo yeKodwa - AFRIKHEPRI
Kandake Amanishakheto: the intrepid queen
Amanishakheto kufufutirwa nemavara chendarama refu murwi tsika Nubia (Sudan). rudzi urwu kuti akabereka Pharaonic kuIjipiti uye akaponesa vavatorwa yaingopambwa panguva 25e youmambo pamusoro Taharqa uye Shabaka heroically matsime pakatanga Persian muna Africa -525 asati neutralizing reArab 7e remakore.
Zvakawanikwa zvekuchera matongo zvinoita kuti zvive nyore kugonesa kuti zvisizvo zvemangwana zveumambo hwechiIjipita zvaivepo kare muNubia. Mumwe anogona kuenzanisa pamakore e5700 nguva yeumambo hweNubia, iyo yakagumburwa neChirungu chete. Iyi ndiyo mhedziso yakakwana yehupenyu hurefu hwehurumende munhoroondo.
Panguva yekupinda kweEgypt neVaRoma pakutanga kwechiKristu, Emperori Kesari Agasisasi pakureba kwesimba rake akamanikidza mauto kuNubia. Mambokadzi Amanishakheto pachake anotora mutungamiriri weuto rake. Ari pamusoro pemasoja ake, anopomera vaRoma uye anorasikirwa neziso munguva yehondo. Pane kurega kuora mwoyo, chiitiko ichi chinowedzera ushingi hwaKandake (Candace) uyo anouyazve muhondo yehondo kusvikira kukundwa nevaRoma, achishamiswa nekusava nesimba uye simba remukadzi uyu.
Ona kufanana kwakaita Kandake uye mazita inopfekwa nevatongi Songhai, Kanda. "Amani" huri zita Queen ndiro zita raMwari yaAmun, anova Mwari mumwe Black Africa. The heroism pamusoro Amanishakheto zvokuti zvose Navahosi vakatevera vakatakura musoro Kandake uye nengano yake yakaramba mupenyu kusvikira kare.
Mufananidzo: Mufananidzo wekusunungurwa kwePiramidi yeBe No 6 kubva kuMeroe (Nubia) kusvika kukudzwa kwaAmanishakheto.
SOURCE: The Cultural Unit of Black Africa, Cheikh Anta Diop, peji 54.
Nhoroondo yeAfrica-nhoroondo yeAfrica
Louise XIV uye mutema Africa - Tidiane Diakité